बढ्दो सडक दुर्घटना – Chitwan Post
सडक दुर्घटना किन बढिरहेको छ ? नेपालमा बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट करिब ३ हजारको मृत्यु हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार ०७४/०७५ मा १० हजार ९ सय ६५ वटा सडक दुर्घटना भएका थिए, जसमा २ हजार सात सय ८९ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस आर्थिक वर्षको असोजसम्म ७ हजार तीन सय २ वटा दुर्घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । दुर्घटनामा ९ सय ४० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
दुर्घटना हुनुमा भारवहन क्षमताभन्दा अति धेरै यात्रु र थोत्रा साधन कारण हुन् । दुर्घटनाको कारण तीव्र गतिमा सवारी हाँकेर भएको आँकडाले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको कुल दुर्घटनामध्ये २ हजार एक सय ७१ वटा दुर्घटना तीव्र गतिको कारण भएको देखिन्छ ।
चालकको लापर्बाहीअन्तर्गत तीव्र गतिमा बस हुइँक्याउने, ओभरटेक गर्ने, सवारी हाँक्दा फोन गर्ने, ओभरलोड यात्रु राख्ने समस्या छन् ।
सवारीसाधन र बाटोको अवस्थाले पनि दुर्घटना निम्त्याएको छ । पटकपटक कक्षा लिएर चेतनामूलक शिक्षा दिए पनि चालकमा परिपक्वता नआउँदा दुर्घटना बढेको छ । यात्रु, सवारी व्यवसायी र चालकबीच त्रिपक्षीय सचेतना हुँदा दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठोस बल पुग्न सक्छ ।
सरकारले आफ्नो मातहतका निकायलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय चालकको लापर्बाही र यात्रुको हतारोको कारण पनि सडक दुृर्घटना बढिरहेको छ । यसमा चालक, यात्रु, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी सबैले बसको क्षमतामाथि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कतिपय देशमा यातायातलाई राज्यले प्रत्यक्ष चलाउँछन् त कतिपयमा कडा नियमन गर्छन् । कतिपय देश त यस्ता छन्, जहाँ ‘भिआईपी’ ले समेत सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । तिनको गुणस्तर, विश्वसनीयता, समय पालना, नियमको दायराले त्यस्तो वातावरण बनाउँछ । हामीकहाँ धेरैभन्दा धेरैले प्रयोग गर्न बाध्य हुने तिनै साधनको न गुणस्तर हुन्छ, न कुनै नियमले नै बाँधिन्छ, समयको पालनाको त कुरै नगरौँ । तिनमा चढ्ने निर्धा–निमुखा परे पनि राज्यको नजर पुग्दैन ।
कुन बसको अवस्था कस्तो छ ? यात्रु चढाउनुअगावै राम्ररी जाँचिनुपर्छ । बेलाबेलामा मर्मत गर्नुपर्छ । दसैँ, तिहार, छठका बेला रातदिन यात्रु ओसारिन्छ । लामो दूरीबाट राति बस चलाएर आएको उही चालक आउनासाथ चलाएरै फर्किन्छ । यो सिजन छोप्ने गुडाइमा सवारीसाधनमा यान्त्रिक समस्या खडा भएको पत्तै हुँदैन । फलस्वरुप, अप्रत्याशित दुर्घटना हुन जान्छ ।
चाडबाडका सवारीसाधनको व्यवस्थापन पनि भरपर्दो हुँदैन । कम दरमा टिकट नपाउने तर बिचौलियाबाट जति पनि पाउने, टिकटमा सिट हुने तर गाडीमा नहुने, क्षमता जति पनि छ भनेर यात्रु तान्ने तर कोचाकोच हाल्नेजस्ता प्रवृत्तिकै कारण दुर्घटना घट्ने गर्छन् । चाडबाडमा हुने दुर्घटना नियमित आकस्मिकताजत्तिकै बनेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने प्रावधान छ । चार घन्टाभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक सवारीले प्रत्येक चार घन्टामा एकपटक आधा घन्टा विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थाअनुसार लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्यरुपमा राखी प्रत्येक ६ घन्टापछि पालैपालो सवारी चलाउन लगाउने कर्तव्य यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीको हुनेछ । कानुनका यी व्यवस्था पालना हुन नसकेकै कारण ठूला दुर्घटना बढेका हुन् । सरकारले ढोका र छतमा समेत यात्रुको भीड देख्दादेख्दै पनि अटुन्जेल यात्रु बोक्न छूट दिएको छ । लामो दूरीमा समेत त्यस्तै गर्ने गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिकताको अभाव छ । यात्रुको अधिकारको त्यहाँ सम्मान हुँदैन । यात्रुलाई भेँडाबाख्राको जस्तो व्यवहार गरिन्छ । सञ्चालक र चालकबाट नियम र कानुनको राम्रोसँग पालना भए÷नभएको यातायात विभागले हेर्नुपर्छ । यात्रु कोच्न अब रोकिनुपर्छ । थोत्रा सवारीसाधनहरुलाई गुड्न रोक लगाउनुपर्छ । बिग्रेका सवारीको मर्मत गरिनुपर्छ । हरेक यात्रुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । व्यवसाही आफैँ उत्तरदायी हुनुका साथै राज्यको अनुगमन प्रणालीसमेत मजबुत भएमात्रै बढ्दो दुर्घटना कम हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचारविरूद्ध एकजुट बनौँ
अप्राकृतिक कामको नकारात्मक परिणाम
सम्बन्धमा खोजेको खुसी
अब विद्यालय खोल्न ढिला गर्न हुँदैन
न्वारन किन गर्ने ? [संस्कार चिन्तन]